Hery Rajaonarimampianina : Tsy maintsy « hihiratra »ny masoandro -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Tsy maintsy « hihiratra »ny masoandro
23/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fotoam-bita, fotoana izay hitafan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ ny vahoaka malagasy isaka ny zoma. Omaly dia niompana betsaka tamin’ny fahatsiarovana ny malagasy rehetra, izay mandia fahasahiranana sy ahiahy noho ny vaovao izay mitranga sy re ny filoha, ary nankahery ny rehetra manoloana ny zava-mitranga, satria dia andalana hatrany ny fanarenana izay tanterahina noho ny krizy dimy taona nisy teto amin’ ny firenena. Mahatsapa ny Filoham-pirenena fa mbola mandalo fahasahiranana isika, ary mampitraka sy mankahery ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra ireo vahoaka izay mandalo fahasahiranana amin’izao noely izao « mbola misy ny fanantenana, betsaka ny fanantenana ka tsy maintsy miatrika isika, ary tsy maintsy miatrika isika » hoy hatrany ny Filoha. Tsy ny krizy ihany anefa no anisan’ny olana izay nahatonga ny firenena amin’izao zava-misy izao fa teo ihany koa ny 50 taona izay niainana taorian’ny nahazoana ny fahaleovantena. Noho izany dia tsotra ny nambaran’ny Filoha fa tsy maintsy hisy ny hazavana ho an’i Madagasikara « tsy maintsy Iratra ny masoandro raha miara-mahatsapa ny Malagasy rehetra isam-batan’olona, fa firenena latsaka an-katerena nandritra ny 50 taona mahery anie no hajorontsika sy harenina ».
Tsy mitarain-tana-miepaka anefa ny Filoham-pirenena na nitaraina, satria dia mafy tokoa ny hiainan’ny mpitantana amin’ny fanarenana ny firenena, ny fampitrakana ny malagasy amin’ny alalan’ny ezaka tanterahin’ny fitondrana ankehitriny no anisan’ny tanjona mankany amin’ny fampandrosoana « eo amin’ny hafainganam-pandeha, dia ny hafainganam-pandeha ambony no misy antsika izao amin’ny asa fampandrosoana rehetra tokony hatao na dia maro aza ny sakantsakana sy ny fingampingana izay atrehina ». Tsapa amin’ ny fomba firesaky ny Filoha ny fahavononany hananarany an’i Madagasikara ankehitriny, na dia eo aza izay vesatra tsy maintsy harenina izany « izay foana no asahiako milaza fa miroso amin’ ny fampandrosoana i Madagasikara , manan-karena isika manana ny ho enti-manana, saingy nampahantrana ny vahoaka. Mbola mandalo fotoana sarotra ny firenena ankehitriny, saingy ny tenako dia mino fa hody ventiny ny rano nantsakaina. Andraso ny firenentsika satria programa maharitra noho niaingana tao anatin’ny efa-taona lasa izay».
Nampanantena teto ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa « hitohy ny asa fampandrosoana, miezaka ny mamaha ny olana araka izay tratra ny fanjakana. Momba ny olan’ ny vary ohatra dia nampitomboina ny vary nafarana, mba hamenoina ny banga vokatry ny hain-tany tamin’ ity taona ity. Ka antenanina fa hidina miandalana ny vidiny amin’ity taona ity» hoy hatrany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina . Mikasika ny tsy fandriam-pahalemana indray kosa dia nilaza ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa « fanamby napetraka ny tsy maintsy hilaminan’ny tanàna, efa mafy ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana , ary ankaherezina hatrany izy ireo amin’izany» hoy ny Filoha. Noho izany dia nirary soa ny vahoaka rehetra ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ izao ankatoky ny fetin’ny noely izao « mirary fety sambatra ho an’ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako na dia eo aza ny fahasahiranana andalovana. Amin’ny asa ihany no handresentsika ny fahantrana, ary matokia fa tsy maintsy mandresy ny ezaka rehetra izay ataontsika. Ho krismasy hanavao ny fo sy ny fanahintsika rehetra anie izao krimasy izao. Samia isika rehetra ho tahian’Andriamanitra» hoy ny Filoha namarana ny fotoam-bita izay firariantsoa noho izao krismasy ho avy izao.
Taorian’ny telo andro nandehanan’ny fitsarana, ny raharaha kidnapping an’i Annie sy Arnaud , dia nivoaka io omaly io ny didy, ka fantatra fa ny 15 tamin’ireo 75 voampanga, dia voaheloka hanao asa an-terivozona mandra-pahafaty . ...Tohiny